असोज २९, काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १२ दशमलव ९१३ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ०८९ प्रतिशत नगद लााभांश गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त लाभांश वितरण र साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले कात्तिक १६ गते १५ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले असोज २२ गते एक दिन बुक क्लोज मिति तय गरेको छ ।
यस आधारमा असोज २० गतेसम्म कायम शेयरधनीले लाभांश र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन् । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १२ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख २३ हजार रहेको छ । १२ दशमलव ९१३ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण पछि पूँजी रू. १४ अर्ब २० करोड ९ लाख पुग्नेछ ।
मैनबत्ति चित्र :
१३ जुलाई २०२१ ११ अक्टोबर २०२१
स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन :
कम्पनीको ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो ओपनिङ मारुबोजू बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा आगामी कारोबार दिनमा कम्पनीको शेयरमूल्य हालकै प्रवृत्तिमा अघि बढ्ने संकेत गर्छ ।
आरएसआई ओभरसोल्ड जोन २७ दशमलव ५१ विन्दुमा छ । यसले शेयर विक्री चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ३२ दशमलव ५४ विन्दुमा छ । उतारचढाव पनि उच्च रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम उच्च हुन्छ भने प्रतिफल पनि उच्च हुने गर्दछ ।
त्यस्तै कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुबै मूल्यरेखा भन्दा तल छ । सोमवारको शेयरमूल्य रू. ३३२ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू ३७९ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।